खाना पकाउने ग्यास छिटै सकिन्छ ! त्यसो भए यसो गर्नुहोस कम्तिमा २ महिना बढी टिक्छ ग्याँस, यी हुन् खाना पकाउने ८ तरिका !!
एजेन्सी । शहरमा बस्नेहरुका लागि सबैभन्दा पिरलो बन्ने गरेको छ खाना पकाउने ग्याँस । हरेक घर/घर र कोठा कोठामा ग्याँसकै बारेमा गन्थनमन्थन हुन्छ ।
अझ भारतको नाकाबन्दीमा त झन् खाना पकाउने ग्याँसको हाहाकार नै मच्चिएको तती दिनहरु अझै पनि ताजै छन् । नेपाल यस्ता ग्यस्जन्य कुरामा भारत लगायत अरु देशहरुमा निर्भर छ। यस कारणले गर्दा पी हामी नेपाली जनताले जतिखेरै पनि ग्याँसको अभाव बेहोर्न पर्ने अवस्था पनि सक्छ ।
त्यसैले यदि तपाई आफ्नो भान्छाको ग्यासलाई लामो समय टिकाउन चाहनु हुन्छ र देशमा आउने यस्ता प्रकारका समस्याहरुबाट टाढा हुन चाहनुहुन्छ भने,